Iindaba - ukunyuka kwexabiso le-coke yenaliti ngoJulayi, i-electrode ye-graphite yehla nge-20%
Ukunyuka kwamaxabiso e-coke yenaliti ngoJulayi, ezantsi kwe-graphite electrode ziphakame ngama-20%.
Njengoko ixabiso lesinyithi liqhubeka nokunyuka, indleko zokwenza isinyithi somlilo ziya kuqhubeka nokunyuka, kunye neendleko zexabiso lesinyithi sombane sisebenzisa isinyithi esilahliweyo njengoko kuboniswa izinto ezingafunekiyo.
Ixabiso le-UHP600 kwimarike ye-graphite electrode yaseIndiya iya kunyuka isuke kwi-2.9 yezigidi zeerandi / itoni ukuya kwi-340,000 rupees / itoni, kwaye ixesha lokumiliselwa liqala ngoJulayi ukuya kuSeptemba 21; Ixabiso le-HP450mm electrode kulindeleke ukuba lenyuke ukusuka kwi-225,000 rupees / ton ukuya kwi-275,000 rupees / ton (inyuswe nge-22%).
Kuxelwe ukuba esona sizathu soku kunyuka kwamaxabiso kukunyuka kweendleko zecoke yenaliti engeniswayo. Ukusuka kwi-US $ 1500-1800 / ngetoni engaphezulu kwe-US $ 2000 / ngetoni ngoJulayi 21, ukonyuka kwamaxabiso kuya kuba ku-11% ukuya kuma-33%, okanye ngaphezulu.